October 24, 2016 अम्बिका अन्तरबार्ता, कला/संगीत, मनोरञ्जन
२०७३ को दशैँतिर नेपाली चलचित्रको इतिहासमै पहिलो पटक मोफसल अर्थात झापाको दमकबाट पोस्टर रिलिज गरिएको नेपाली कथानक चलचित्र हो ‘राधा’ । पोस्टर रिलिज मोफसलमा गरिएको भएपनि अहिले चलचित्र भने देश विदेश सबैतिर चर्चाको शिखरमा छ । प्रदर्शन शुरु नभएपनि चलचित्रको चर्चा सुन्दा ‘राधा’ ले सफलता पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कात्तिक १२ गतेदेखि अल नेपाल रिलिजका साथ प्रर्दशन हुन लागेको यहि कथानक चलचित्रका राधाका निर्देशक योगेश घिमिरेसंग संयन्त्र डटकमका लागि अन्तरबार्ता लिइएको छ । प्रस्तुत छ निर्देशक घिमिरेसंगको कुराकानी :
१. चलचित्र राधाको प्रचार प्रसार कस्तो भईरहेको छ ?
राम्रै संग प्रचार प्रचार भईरहेको छ । अहिले प्रचार प्रसारका क्रममा साथै मेरो घर पनि झापा भएकोले यतातिर आईपुगेको छु ।
२. छायांकनका लागि पुर्व नै रोज्नुको खास कारण के हो ?
खास कारण म पुर्वेली हो । आफ्नै ठाउं आफ्नै गाउंको दृश्यहरु चलचित्रमा उतार्न पाउदा मलाई खुशी लाग्छ । आफ्नो ठाउंको प्रमोशन गर्नु हामी सबैको कर्तब्य पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
तपाई हामीले देख्दै आएको ठाउलाई अत्यन्तै कलात्मक ढंगले क्यामरामा कैद गरिएको छ । यस फिल्मको प्राबिधिक पक्ष अत्यन्तै उत्कृष्ट बनाउने प्रयास गरेका छौ हामीले । त्यसैले एक पटक तपाईले चलचित्र हेर्नैपर्छ कस्तो छ भनेर जान्नका लागि ।
३. छपक्कै भन्ने बोलको गीत अत्यन्तै हिट भएको छ । तपाईको फिल्ममा गित एउटा न एउटा हिट बनाउन खोज्नु हुन्छ हो ?
हो अवश्य पनि । सिनेमाको मेरुदण्ड हो गित संगित भनेको । यसले सबैलाई छुन सक्छ । अनि नोटबुकको गाला रातै भन्दा उत्कृष्ट बनाउने प्रयास गरेको छु । यो गीतको युटुबका भ्युअर्स नि १० लाख नाघिसकेको छ ।
४. तपाईको चलचित्र संग २ वटा हिन्दी चलचित्र जुद्दै छ यस बिषयमा के भन्नु हुन्छ ?
नो कमेन्ट । यसमा मेरो केही भन्नु छैन । भन्नु त यति छ एउटा पारिवारिक नारी प्रधान चलचित्र अवश्य पनि नेपाली दर्शकले हेर्नुहुन्छ भन्नेमा म बिश्वस्त छु । तपाई हाम्रै गाउ समाजको कथा लाई उतार्ने प्रयास गरेको छु ।
बजारमा कृष्ण धाराबासीको राधा र यो राधामा के फरक छ भन्ने चर्चा छ । त्यो चाहि चलचित्र हेरेपछि नै थाहा पाउनु हुन्छ । यस चलचित्रका बिषयमा दर्शकको पनि राम्रै प्रतिक्रिया पाएको छु ।
५. चलचित्र राधाको सेक्रेट पक्ष केही रहेको छ ?
अरु धेरै छन् ,एउटा चाहि भन्दिन्छु । जीवन लुईटेललाई यस चलचित्रमा आफ्नै रियल कपालमा देख्न सक्नु हुन्छ । नक्कली कपाल फुकालेर आफ्नै कपालमा जीवन जीले खेल्नु भएको छ । सायद भिडियो राम्ररी नियालेर हेर्नु भयो भने पत्ता लगाउनु हुनेछ । अरु सेक्रेट पर्दामै देखीनेछ ।
प्रस्तुती : लोकनाथ रिजाल
राधा’ले लगानी उठाएन भने अर्काेमा लगानी नै गर्दिन – निर्माता कार्की
पहिलो पटक मोफसलमा चलचित्रको पोष्टर रिलिज